Mashandisiro Aungaita JW ORG Pafoni Kana paTablet | Rubatsiro rwepaJW.ORG
Zvose zvinobuda pakombiyuta paunenge uchishandisa jw.org ndizvowo zvinobuda paunenge uchishandisa foni kana tablet. Asi mabudiro acho akati siyanei kuitira kuti jw.org ishandisike zvakanaka pafoni kana tablet yaunenge uinayo. Mazano ari pasi apa achakubatsira kuti uwane zvaunenge uchitsvaga pajw.org.
Kutsvaga zvauri kuda uchishandisa foni
Kuvhura nyaya nezvitsauko zvemabhuku
Kuvhura Bhaibheri repaIndaneti
Kuteerera nyaya yakarekodhwa
Pakombiyuta, zvikamu zvikuru zvemashoko anokubatsira kutsvaga zvauri kuda zvakadai seZVINODZIDZISWA NEBHAIBHERI kana MABHUKU zvinobuda nechepamusoro pepeji, uye kana ukazvibaya panobva pabuda zvikamu zviduku nechekuruboshwe zvakadai seMIBVUNZO YEBHAIBHERI INOPINDURWA kana MAZANO EKUBATSIRA MHURI.
Asi kana pari pafoni mashoko aya anobuda achidzika sezviri kuratidzwa pamufananidzo uyu. Uye kana usisiri kuashandisa, anobva anyangarika, kuitira kuti usare uchinyatsoona peji racho zvakazara.
Baya kapikicha kakafanana neaka kari nechekumusoro kuti zvikamu zvikuru zvemashoko anokubatsira kutsvaga zvibude kana kuti zvinyangarike. Chibaya chikamu chezvauri kuda kuona.
Kuti uone zvimwe zviri muchikamu ichocho baya kapikicha kakafanana neaka. Chibaya zvauri kuda kuona.
Kuti uvhare zviri kubudiswa muchikamu ichocho baya kapikicha kakafanana neaka.
Baya kapikicha kakadai kuti udzoke papeji yekutanga.
Baya kapikicha kakadai kuti usarudze mutauro wauri kuda.
Baya kapikicha kakadai kuti utsvage nyaya yauri kuda pajw.org.
Pakombiyuta, misoro yese yenyaya dziri mubhuku racho inenge ichiratidzwa paunenge uchiverenga zviri mubhuku racho. Asi kana uchishandisa foni misoro yacho inonyangarika.
Baya kapikicha kakaita seaka kuti uone misoro yenyaya iri mubhuku racho. Chibaya nyaya kana chitsauko chauri kuda.
Baya kapikicha kakaita seaka kuti uone nyaya kana chitsauko chiri kumashure.
Baya kapikicha kakaita seaka kuti uone nyaya kana chitsauko chiri kumberi.
Baya kapikicha kakaita seaka kuti uvhare misoro yenyaya iri mubhuku woenderera mberi nekuverenga nyaya yako.
Enda pakanzi MABHUKU NEZVIMWEWO > BHAIBHERI woribaya kuti utange kuverenga. Kana kuti enda papeji yokutanga wobaya link yakanzi Verengera Bhaibheri paIndaneti.
Chisarudza bhuku reBhaibheri nechitsauko chauri kuda wobva wabaya bhatani rakanzi Chivhura.
Paunenge uchiverenga uchidzika nechitsauko chacho, bhuku nechitsauko chauri kuverenga zvicharamba zvichiratidzwa nechepamusoro kuitira kuti zvikuitire nyore kuzovhura chimwe chitsauko.
Baya kapikicha kakaita seaka kuti bhuku nechitsauko chacho zvibve. Izvi zvinoita kuti ugone kuona mashoko akawanda ezvauri kuverenga. Kuti usarudze chimwe chitsauko kwidza kunotangira peji rawakavhura kana kuti dzika kwarakaperera.
Baya kapikicha kakaita seaka kuitira kuti bhuku nechitsauko zvirambe zviri nechokumusoro.
Baya kapikicha kakaita seaka kuti uone mabhuku ese eBhaibheri, kusanganisira mashoko ekutanga nemaappendix.
Baya kapikicha kakaita seaka kuti uone chitsauko chiri kumashure.
Baya kapikicha kakaita seaka kuti uone chitsauko chiri kumberi.
Baya kapikicha kakaita seaka kuti mabhuku ese eBhaibheri asabude.
Kana nyaya yauri kuverenga yakarekodhwa, pachabuda chekuridzisa chakafanana nekapikicha kari pamusoro apa.
Baya Play kuti uteerere nyaya yacho.
Baya Pause kuti umbomisa zvauri kuteerera. Baya Play zvakare kuti uenderere mberi nekuteerera.
Unogona kufambisa kanhu kari kuratidzwa papikicha iyi kuti uteerere pauri kuda.
Paunenge uchiverenga uchidzika nenyaya, chekuiridzisa chacho chicharamba chiri nechepamusoro. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kumbomisa kana kuenderera mberi nenyaya yacho usingarasike kuti wanga wapapi.